Ọgwụ na ịkpụzi - Mestech Industrial Limited
Plastic injection ịkpụzi bụ ihe kasị n'ọtụtụ ebe na otu nke n'etiti plastic ịkpụzi. A na-eji akụkụ ọgwụ plastik arụ ọrụ na eletrọniki, eletriki, eletriki, ahụike, njem, ụgbọala, ọkụ, nchedo gburugburu ebe obibi, nchekwa, ngwa ụlọ, akụrụngwa egwuregwu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ngwaahịa.
Gịnị bụ ọgwụ ịkpụzi? Ihe nkedo nkedo nke plastik bu ihe n'icheputa ihe maka imeputa ihe di iche iche di iche iche, site na ichoghari ihe ndi gbazere agbaze agbaze, ogwu na-eme ka ha di ike, mgbe ha di nma na ogwugwo, iji nweta usoro ndi ozo. Usoro a kwesịrị ekwesị maka mmepụta ogbe nke akụkụ dị mgbagwoju anya na ọ bụ otu n'ime usoro nhazi dị mkpa. E nwere 6 nkebi: ebu mechie, gbazee plastic injection, mgbali ịnọgide na-enwe, obi jụrụ, ebu oghere na ngwaahịa na-apụ. Speed, mgbali, ọnọdụ (ọrịa strok), oge na ọnọdụ okpomọkụ bụ isi okwu 5 nke ịkpụzi ọgwụ.
Ihe ato nke ulo ogwu ogwu
Ngwa nke ogwu na ịkpụzi ngwaahịa
(1) na ngwaahịa Elektrọnik:. Nkwukọrịta igwe elektrọnik na ngwa elektrọnik (ụlọ plastik, ogige, igbe, mkpuchi) Ekwentị mkpanaaka, ekweisi, telivishọn, ekwentị vidiyo, igwe POS, mgbịrịgba ọnụ ụzọ.
(2) na ngwa ụlọ: Kọfị na-eme kọfị, juicer, ngwa nju oyi, igwe ntụ oyi, igwe ikuku na igwe ndozi igwe
(3) na akụrụngwa akụrụngwa: Mita eletrik, igbe eletrik, ụlọ ọrụ eletrik, onye na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro, mkpuchi mkpuchi na ntụgharị
(4) na ọgwụ na ahụike na akụrụngwa na ngwaọrụ: ọkụ na-arụ ọrụ, sphygmomanometer, sirinji, dropper, karama ọgwụ, ịhịa aka n'ahụ, ngwaọrụ mwepụ ntutu, akụrụngwa mgbatị
(5) na akụrụngwa: Ogwe aka ahụ, oghere batrị, modul ihu, igbe njikwa, oche nkwado oche, ebe a na-anọchi anya, fenda, bọmbụ, mkpuchi chassis, mgbochi mkpọtụ, oghere ụzọ azụ.
(6) N’ụlọ ọrụ mmepụta ihe: Ngwaọrụ akụrụngwa, gia, mgba ọkụ, ọkụ.
(7) Ngwaọrụ okporo ụzọ na akụrụngwa akụrụngwa (mkpuchi oriọna, mkpuchi) oriọna mgbaama, akara aka, ihe nyocha mmanya.
Ebu, ọgwụ ịkpụzi igwe na plastic ngwaọrụ mejupụtara a isi unit nke injection ịkpụzi. The ebu na injection ịkpụzi igwe bụ mmepụta ngwá, na plastic akụrụngwa na-eji na-mejupụtara ngwaahịa ihe.
1. akpụzi ebu
Ọgwụ ebu bụ ụdị ngwá ọrụ iji mepụta ngwaahịa plastik; ọ bụkwa ngwá ọrụ iji nye ngwaahịa plastik zuru ezu na oke nha. Ọgwụ na ịkpụzi bụ ụdị nke nhazi usoro eji ogbe mmepụta nke ụfọdụ mgbagwoju akụkụ. Kpọmkwem, gbazee plastic na-agbara n'ime ebu ebu site na ọgwụ ịkpụzi igwe n'okpuru nnukwu nsogbu, na kpụrụ ngwaahịa na-enwetara mgbe jụrụ na-agwọ ya. Ọgwụ ebu nwere ike kere n'ime dị iche iche dị ka ndị dị iche iche ebu Ọdịdị, ngwaahịa imewe chọrọ, mmepụta mode na echichi na iji mode.
N'ihi nnukwu nrụpụta nke ebu, mana ogologo ndụ ha na arụmọrụ dị elu, a na-ejikarị ha maka imepụta oke. Ọgwụ ebu na-eji maka uka mmepụta nke plastic akụkụ. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke elu-arụmọrụ plastic ngwaahịa, ukwuu na-ekere òkè na-eri nke ebu mmepụta, otú n'ichepụta na-eri nke otu ngwaahịa ọgwụ ịkpụzi bụ nnọọ ala karịa nke ndị ọzọ nhazi ụzọ. E nwere usoro atọ nke imepụta akpụzi yana nkwado nkwado.
(1) akpụzi imewe:
Ebu imewe dabeere na ngwaahịa imewe, ojiji nke imewe software, dị ka ebu n'ichepụta larịị nke n'ibu nhazi na Ọgwụ na ịkpụzi usoro e ji mara, imewe nke dum ebu usoro, akụkụ.
(a) Nzọụkwụ mbụ bụ nyochaa nhazi nke ngwaahịa plastik
(b) Nzọụkwụ nke abụọ bụ nhọrọ nke ịnwụ anwụ
(c) Nzọụkwụ nke atọ bụ usoro nhazi ebu
(d) Nzọụkwụ nke anọ bụ akụkụ akụkụ ebu
(2) Nhazi ebu
Akpụzi nhazi bụ tumadi site n'ibu nhazi mezue ịbịaru review → ihe nkwadebe → nhazi → ebu isi nhazi → ebu isi nhazi → electrode nhazi → ebu akụkụ nhazi → nnyocha → nzukọ na-efe efe ebu → ikpezi ebu mold mmepụta
Usoro nhazi nke ịkpụzi ọgwụ na-adabere na mgbagwoju anya na ọkwa nhazi nke ebu ahụ. Usoro mmepụta ihe niile bụ 20-60 ụbọchị ọrụ. Igwe eji arụ ọrụ ịkpụzi: CNC, lathe, igwe na-egwe ọka n'ozuzu, igwe na-agagharị agagharị, EDM, WEDM, yana nzukọ nke ngwaọrụ aka, ngwaọrụ ihe atụ, wdg.
(3) ofdị ogwu ntanye:
Ọgwụ ebu nwere ike kere n'ime dị iche iche dị ka ebu Ọdịdị, ngwaahịa imewe chọrọ, mmepụta mode na echichi na iji mode.
(a) Ọkpụkpụ efere abụọ: na ịkpụzi nkedo, a na-ekewapụta akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụzi, wee wepụta akụkụ plastik, nke a makwaara dị ka ebu efere okpukpu abụọ. Ọ bụ ihe nkedo dị mfe na ntoala plastik. Ọ nwere ike e mere dị ka otu uji eze injection ebu ma ọ bụ multi oghere oghere ebu dị ka ina. Ọ bụ a ọtụtụ-eji ọgwụ ebu. Ebu maka otu ma ọ bụ ọtụtụ oghere ịkpụzi,
(b) Akpụkpọ nkụ ato: a makwaara dị ka ebu nkewa abụọ. E jiri ya tụnyere ihe mpempe mpịakọta mputa nke mpịakọta, mpịakọta nkewa nkewa na-agbakwunye ihe na-ebugharị na-agbanwe agbanwe na ngwongwo edozi maka ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ. N'ihi usoro ya dị mgbagwoju anya na ọnụahịa nrụpụta dị elu, a naghị ejikarị ya ebu nke akụkụ buru ibu.
(c) Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ: ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ezo aka na ebu nke na-eji ngwaọrụ kpo oku eme ka agbaze na ọwa ahụ adịghị eme ka ọ sie ike mgbe niile. N'ihi na ọ bụ ihe oru oma karịa na omenala ebu mmepụta, na ndị ọzọ na-azọpụta ngwaọrụ, ya mere na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ ebu na taa ulo oru mepere emepe mba na mpaghara na-ọtụtụ-eji. Usoro ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere otu sistemụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ karịa ebu nkịtị, yabụ ọnụ ahịa dị elu.
(d) colorkpụzi agba agba abụọ: nke a na-akọwakarị dị ka ụdị ihe plastik abụọ n'otu igwe ọgwụ na-akpụzi ọgwụ na ịkpụzi igwe, ịkpụzi abụọ, mana ngwaahịa na-akpụzi naanị otu ugboro. N'ozuzu, a na-akpọkwa usoro a na-akpụzi okpukpu abụọ, nke a na-emecha site na nhazi nke ebu, ma chọọ igwe ọkpụkpọ agba agba abụọ pụrụ iche.
(4) The ewu subsystem nke ọgwụ ebu bụ dị ka ndị
Ọgwụ akpụzi na-adịkarị mejupụtara ndị na-esonụ sub-usoro:
(a) Onu ogugu. Ọ na-ezo aka na ọwa mmiri plastik na ebu site na ntụtụ ntụtụ na oghere. Usoro ihe eji eme ọnụ na-ejikọkarị sprue, onye nkesa, ọnụ ụzọ na oghere oyi.
(b) Usoro nkewa na usoro isi ihe.
(c) Usoro nduzi. Na plastic ebu, ọ tumadi nwere ọrụ nke n'ọnọdu, eduzi na-amị ụfọdụ n'akụkụ mgbali iji hụ na izi ezi nke na-akpụ akpụ na ofu ebu mmechi. Usoro mmechi a na - anwu anwu bu ogidi ntuziaka, aka ndu ma obu uzo ndu (meghere ozugbo na ndebiri) na uzo cone.
(d) jectiongbapụ / demoulding usoro. Gụnyere inupụ na isi Anam Udeme usoro. A na-ejikarị eme ihe iji dọọ akụkụ ahụ site na ebu. Ihe mejuputara ya bu mkpanaka ogwu ma obu ihe nkedo ma obu ihe nkpuchi, ihe nkpuchi, nkedo nke nkpuchi, ihe nleghari anya na ndi ozo.
(e) Usoro njikwa ikpo ọkụ. Jụrụ na kpo oku ngwaọrụ.
(f) Iyuzucha sistemu.
(g) Nkedo akụkụ na-ezo aka n'akụkụ mejupụtara ebu ebu. Ọ tumadi na-agụnye: ntụmadị, nwanyi na-anwụ, isi, akpụ mkpanaka, akpụ mgbanaka na fanye.
(h) Amụma na akụkụ arụnyere. .
(5) Ihe maka ebu
Plastic ebu na-agụnye thermoplastic ebu na thermosetting plastic ebu. Achọrọ nchara maka ebu plastik ka inwe ụfọdụ ihe ndị dịka ike, ike, nkwụsi ike na-eyi, nkwụsi ike thermal na corrosion resistance. Na mgbakwunye, ọ na-chọrọ inwe ezi processability, dị ka nta okpomọkụ ọgwụgwọ, mma nhazi arụmọrụ, mma corrosion eguzogide, mma-egweri na polishing arụmọrụ, mma idozi ịgbado ọkụ arụmọrụ, elu roughness, ezi thermal conductivity na mụ size na udi nke na-arụ ọrụ ọnọdụ.
Kinddị ụdị ọgwụ eji eme ihe na ọgwụ ntanye nwere mmetụta dị ukwuu na nhọpụta nke nchara ebu. Ọ bụrụ na agbakwunye onye na-agba ume ma ọ bụ ihe mgbakwunye mgbanwe ndị ọzọ, dị ka eriri iko, mmebi nke ebu ahụ dị ukwuu, ya mere, a ga-atụle nhọrọ ihe niile. Ihe siri ike acid bụ PVC, POM, PBT; adịghị ike acid plastic ihe bụ PC, PP, PMMA, PA. N'ozuzu, a na-ahọrọ S136, 1.231, 6420 na ihe ndị ọzọ na-akpụzi maka plastik siri ike, ebe S136, 1.2316420, SKD61, NAK80, pak90718, wdg nwere ike ịhọrọ maka plastik na-adịghị ike. Ọdịdị chọrọ nke ngwaahịa nwekwara mmetụta dị ukwuu na nhọrọ nke ihe ebu. N'ihi na uzo akụkụ na ngwaahịa na mirror elu polishing, ihe ndị dị bụ S136, 1.2316718, NAK80 na pak90420. The ebu na elu nghọta chọrọ kwesịrị ịhọrọ S136, sotere 420. Ọ bụrụ na naanị izute ngwaahịa chọrọ na-enweghị ịtụle price na-eri, nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo mmebe, ebu n'ichepụta na-eri bụkwa ihe kacha mkpa
2.1njection ịkpụzi ngwaọrụ
(1). Ọgwụ na ịkpụzi igwe:
ọ bụ isi na ịkpụzi akụrụngwa maka ime thermoplastic ma ọ bụ thermosetting plastik n'ime ụdị dị iche iche nke ngwaahịa plastik site na ịkpụzi nkedo nkedo nkuku nkuku nkuku, nkedo nkedo a na-ahụ anya, igwe na-akpụzi agba agba abụọ, igwe eletriki eletriki zuru ezu, agbanyeghị ụdị ụdị Ọgwụ na ịkpụzi igwe, ya isi ọrụ bụ abụọ:
(a) Kpoo plastik ka ọ gbazee.
(b) A na-etinye nrụgide dị elu na plastik a wụrụ awụ iji kpụpụ ma mejupụta oghere ahụ. The isi parameters nke injection ịkpụzi igwe bụ: clamping ike, kacha ntụtụ olu, kacha na kacha nta ebu ọkpụrụkpụ, na-akpụ akpụ ọrịa strok, sere mkpanaka spacing, ejection ọrịa strok na ejection nsogbu. Maka akụkụ nwere nha dị iche iche, ihe owuwu na akụrụngwa, yana ebu nke nha na ụdị dị iche iche, a ga-ahọrọ ụdị dị iche iche na oke nke igwe ịkpụzi ọgwụ. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ eletrik zuru ezu nwere uru nke ọsọ ọsọ ọsọ, njikwa ziri ezi na arụmọrụ arụmọrụ. A na-eji ya maka ogwu ịkpụzi ụfọdụ nkenke akụkụ.
(2) inyeaka akụrụngwa:
(a) Igwe ihe nkedo nke nkedo ogwu bu akụrụngwa na-emepụta akpaka nke nwere ike i imitateomi ụfọdụ ọrụ nke aka mmadụ, wee nwee ike ịchịkwa ya na-ebufe ngwaahịa ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka ihe ndị chọrọ chọrọ. Onye na-eme ihe nwere ike hụ na nkwekọ nke arụmọrụ na-arụ ọrụ, melite ogo ma mee ka ọ dị nchebe. Na ngwa ngwa mmepe nke plastic nhazi ụlọ ọrụ na China, ogo akpaaka nke ọgwụ ịkpụzi ngwá na-aghọ elu na elu. A na-ejikarị ígwè ọrụ ịkpụzi ọgwụ na-emepụta ọgbara ọhụrụ na manipulators iji melite arụmọrụ arụmọrụ.
(b) Onye na-ekpo ọkụ mmanụ / mmiri chiller: kpo oku ma ọ bụ obi jụrụ site na mmiri mmiri na-asọ site na ebu ahụ, na-abawanye ụba ọkụ, na-eme ka ịdị elu dị elu, ma ọ bụ na-ebelata ngwa ngwa ngwa iji meziwanye nrụpụta.
(c) Dehumidification draya: wepụ mmiri si plastic ihe site kpo oku na ịfụ.
Ọgwụ ebu ogbako
Ọgwụ na ịkpụzi mmepụta akara
Plastic akụkụ sere akara
Mbadamba plastik ejiri na ịkpụzi ọgwụ: N'okpuru ebe a bụ thermoplastics ndị a na-ejikarị eme ihe na ịkpụzi: Acrylonitrile Butadiene Styrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), bụ thermoplastic na amorphous polymer. ... Polyethylene. ... Polycarbonate. ... Polyamide (naịlọn) ... High Impact Polystyrene. ... Polypropylene
Ihe onwunwe Njupụta Ebu
Mwepu Njirimara Ngwa
ABS(Acrylonitrite Butadiene Styrene) 1,04 ～ 1,08 0,60 Kwụ siri ike, ezigbo akụrụngwa akụrụngwa,mfe electroplating, mfe injection ịkpụzi ụlọ plastik maka ngwaahịa eletrọniki
PC (Polycarbonate) 1.18 ～ 1.20 0,50 Ezi mmetụta ike, anụ siri ike na mkpuchi dị mma.Adịghị emebi corrosion na-eyi ndị na-eguzogide ụlọ plastik, mkpuchi nchedo, obere akụkụ nnyefe maka ngwaahịa eletriki, ngwaahịa eletriki
PMMA(Polymethyl methacrylate) 1.17 ～ 1.20 0,60 Ọ nwere ezi transmittance nke 92% na ezi ike mbara igwe zuru oke.Ogbenye mmetụta dị ala, ọ dị mfe nrụgide na-akụ Anya uzo ma gosiputa akara ngosi nke ngwa
PP(Polypropylene) 0,89 ～ 0,93 Ugboro abụọ Ọ nwere nnukwu shrinkage, mmiri na-eguzogide,elu okpomọkụ na-eguzogide ma ọ dịghị mfe ịdọka.Low eyi nguzogide, mfe ịka nká, ogbenye ala okpomọkụ arụmọrụ Ihe oriri, tebụl, microwave oven igbe, ọgwụ na ahụ ike
(chloride) 1.38-1.41 1.50 Siri ike, na-eyi uwe na-eguzogide, mkpuchi dị mma, na-eme ka o sie ike karị, adịghị ike arụmọrụ dị elu Na-eme ọkpọkọ na profaịlụ
Naịlọn 1.12 ～ 1.15 0.7-1.0 O siri ike, na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide mmiri, ike ọgwụgwụ na-eguzogide ọgwụ, mkpuchi mkpuchi dị mma. Mwepu dị elu, nduzi Ngwa akụkụ, akụkụ kemịkal, nnyefe akụkụ
POM (Polyacetel) 1.42 Ugboro abụọ Njirimara igwe, ike dị elu na ike, na-eyi nguzogide na mmetụta na-eguzogide. Adịghị mma thermal kwụsie ike Ngwa akụkụ, akụkụ kemịkal, akụkụ nnyefe, akụkụ esemokwu na akụkụ nnyefe na-arụ ọrụ na ụlọ okpomọkụ
TPU(Thermoplastic Polyurethane) 1,05 ～ 1,25 1.20 Elastomer, na-eyi na-eguzogide ọgwụ, mmanụ na-eguzogide ọgwụ, elu na ala okpomọkụ ekwedo, na-abụghị na-egbu egbu Ejikarị ya na ọgwụ, nri, ngwaahịa eletriki na gburugburu ebe obibi dị ala
Ọgwụ na ịkpụzi usoro bụ a usoro na gbazee ngwaọrụ na-pressurized, agbara ndi mmadu, mma na iche iji na-a ụfọdụ udi nke ọkara okokụre akụkụ. General ịkpụzi ịkpụzi usoro nke plastic akụkụ tumadi na-agụnye 7 nkebi. - Ntọala oke -> ebu na - emechi -> ndochi -> (enyere aka, mmiri nyeere) nrụgide na - echekwa -> jụrụ -> oghere oghere -> demoulding.
Speed, mgbali, ọnọdụ (ọrịa strok), oge na okpomọkụ bụ isi ihe dị mkpa nke usoro ịkpụzi ọgwụ. Na ogwu ịkpụzi mmepụta, ọ bụ tumadi na-debug ndị a parameters ka mma na inweta ruru eru nke na ọdịdị.
Asaa ahụkarị injection ịkpụzi technology
1. Ugboro abụọ injection ịkpụzi
2. Ntughari ntụtụ
3. Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
3. IMD: in-ebu ihe ịchọ mma ntụtụ
4. Ọgwụ nke akụkụ buru ibu
5. Ọgwụ na ịkpụzi nke pụta ìhè akụkụ
6. Ọgwụ na ịkpụzi nke ụgbọala akụkụ
7. Mkpa mgbidi akụkụ ogwu ogbugba
Anyị nwere ike inye gị plastic injection kpụrụ akụkụ dị iche iche ọkọlọtọ injection mouldable polima na olu nke 0.1gram-10kgs ị chọrọ. Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike ịkwụsị ịtinye ihe ntinye, ihe jikọtara ya ma ọ bụ akụkụ plastik ndị ọzọ na-akpụzi iji nye ngwaahịa gị ọkachamara imecha. A pụkwara ịmepụta mgbakọ dị iche iche dị ka akụkụ nke ọrụ ịkpụzi ntanye plastik anyị ma tinye ya na ihe ị chọrọ. Otu ihe a metụtara usoro dị iche iche gwụchara, gụnyere:
* Ihe mkpuchi plastik
* Ihe osise
* Dijitalụ Onyonyo
* Mbadamba ụrọ
* Ọta RF
* Nkwakọ ngwaahịa na ịkwatu ihe
* Ọgwụ na ịkpụzi àgwà akara Anyị na-enye ngwa ngwa tooling, prototyping na post ịkpụzi ọrụ.
Kpụzi ntụpọ na nchọpụta nsogbu
Mgbe ịkpụzi, enwere ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti akụkụ plastik na ụkpụrụ a kara aka akọwapụtara (ụkpụrụ nyocha), nke na-enweghị ike iru ihe usoro ndị ọzọ chọrọ. Nke a bụ ntụpọ nke akụkụ plastik, nke a na-akpọkarị nsogbu dị mma. Anyị kwesịrị ịmụ ihe kpatara nsogbu ndị a wee belata ha pere mpe. N'ikwu okwu n'ozuzu, ntụpọ ndị a na-akpata akụkụ ndị a: ebu, akụrụngwa, usoro nhazi, akụrụngwa gburugburu na ndị ọrụ.
1.The nkịtị ntụpọ:
(1). Agba dị iche: ma ọ bụrụ na agba nke ọgwụ ịkpụzi akụkụ dị iche iche site na otu ọkọlọtọ agba sample site gba ọtọ anya, ọ ga-ekpe ikpe dị ka agba dị iche n'okpuru ọkọlọtọ ìhè isi.
(2). Ezughi oke (enweghi gluu): ihe nkedo ogwu adighi ejuputa, ma enwere otutu, voids, oghere ndi ozo, wdg, nke na-adabaghi ​​na ihe omuma nke a na-akpo gluu.
(3). Mgbagha na-emebi emebi: ọdịdị nke akụkụ plastik ga-agbagharị ma gbanwee mgbe demoulding gasịrị ma ọ bụ n'oge ọzọ. Ọ bụrụ na akụkụ kwụ ọtọ na-eche ihu n'ime ma ọ bụ na mpụga, ma ọ bụ akụkụ dị larịị nwere mgbago na mgbada, ọ bụrụ na ụkwụ ngwaahịa a ahaghị, a na-akpọ ya nrụrụ, nke nwere ike kewaa n'ime nrụrụ mpaghara na nrụrụ zuru oke.
(4). Akara akara akara (akara): akara akara n'elu akụkụ plastik, nke e guzobere site na ngwakọta plastik na ebu ahụ, mana agbaze anaghị agwakọta ọnụ n'ụzọ zuru oke ha, yabụ enweghị ike ịbanye ha n'otu. Ha na-abụkarị usoro kwụ ọtọ, na-emepe site na miri emi na-emighị emi. Nke a na onu nwere ụfọdụ mmetụta na ọdịdị na n'ibu Njirimara.
(5). Ripple: elu nke ogwu kpụrụ akụkụ nwere gburugburu ma ọ bụ ígwé ojii dị ka waviness, ma ọ bụ n'ime nke uzo ngwaahịa nwere wavy ụkpụrụ, nke a na-akpọ ripple.
(6). N'elu ọnụ (flash, Cape).
(7). Akụkụ dị iche iche: ịda mbà na mpempe akwụkwọ nke ọgwụ ndị a kpụrụ na usoro ịkpụzi
2. Ogo njikwa na mma: Ọ gụnyere teknụzụ na njikwa
(1). Nka na ụzụ: nhọta ziri ezi nke ihe, nhazi ngwaahịa, nhọrọ nke ihe nkedo kwesịrị ekwesị, njikarịcha nke nhazi ihe eji eme ihe iji kwado njuju, ikpochapu na mwepụ akụkụ, ọnọdụ ezi uche dị na nkewa nkewa, ọwa mmiri na eriri roba; iji ngwa ngwa ịkpụzi ọgwụ dị elu ma ọ bụ usoro.
(2). Nchịkwa njikwa: njikwa mma nke ihe ndị na-abata, nhazi nke ụkpụrụ na ụkpụrụ dị mma, ọzụzụ teknụzụ, usoro nke usoro usoro ezi uche dị na ya, ndekọ data na nyocha, na nhazi nke usoro mma.
Companylọ ọrụ Mestech na-emepụta ọtụtụ narị ebu na ọtụtụ nde ngwaahịa plastik maka ndị ahịa obodo na ụwa kwa afọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ma ọ bụ jụọ banyere e kwuru banyere plastic injection ịkpụzi, biko kpọtụrụ anyị taa.